တရားစခန်းတွင် နေထိုင်ခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုတိုးတက်စေနိုင်သလဲ – Shwehealth.com
တရားစခန်းတွင် နေထိုင်ခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုတိုးတက်စေနိုင်သလဲ
12. မေ 2016 1. ဇှနျ 2016
တရားထိုင်ခြင်းသည် သင်၏ကျန်းမာရေးကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ ကောင်းမွန်စေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြားဖူးပြီးသားပင် ဖြစ်သည်။ တရားထိုင်ခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေး ကို ဘယ်လိုတိုးတက်စေသလဲ။ တရားထိုင်ခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာတွေကောင်းသလဲ။ ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့လဲ။ ဤအချက်များသည် ယခုဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြပေးမည့် အဓိက အချက် များပင် ဖြစ်ပါသည်။ တရားထိုင်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို လေ့လာမှု ၃၀၀၀ ကျော်ဖြင့် သိပ္ပံနည်း ကျ သက်သေပြထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါသည်။
တရားထိုင်ခြင်းသည် မလိုလားအပ်သော စိတ်ခံစားမှုများဖြစ်ကြသည့် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ စိတ်ဖိ စီးမှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် အထီးကျန်ခြင်းတို့ကို လျော့နည်းစေနိုင် သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် အတန်းတွင်း တရားထိုင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်ကြသော ကျောင်း သား ၄၀၀ ကျော်သည် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများ သိသာစွာလျော့ကျသွား ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အခြားကောက်ချက်တစ်ချက်ကလည်း တရားထိုင်ခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို ကုသရာတွင် စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများဖြင့် ကုသခြင်းကဲ့သို့ပင် တူညီသော ထိရောက်မှုရှိသည် ဟု ဆိုထားသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ၀ိပဿနာကဲ့သို့သော တရားထိုင်ခြင်းမျိုးသည် ဦးနှောက်ရှိ စိတ်လှုပ်ရှား မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော အညိုရောင်အစိတ်အပိုင်းသိပ်သည်းဆကို လျှော့ချပေးနိုင် ကြောင်း တွေ့ရှိထားသည်။ အခြားသော စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးများဖြစ်သည့် နာကျင်မှု ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အကောင်းမြင်ခြင်း၊ တင်းမာမှုများ လျော့ကျခြင်းနှင့် စိတ်အားတက်ကြွခြင်း စသည် တို့ကိုလည်း ရရှိနိုင်သေးသည်။ ထို့အပြင် စိတ်အလိုလိုက်၍ အစားစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း တို့မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
တရားထိုင်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးများဖြစ်သည့် သိမြင်နားလည်လွယ်ခြင်း၊ ဖန်တီးတွေးတောနိုင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းမှုတို့တွင် ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင် သည်။ ထို့အပြင် တရားထိုင်ခြင်းသည် စိတ်စွမ်းအားမြင့်မားလာအောင် ကူညီပေးနိုင်သည့်အပြင် အာ ရုံစူးစိုက်မှု၊ မှတ်ဥာဏ်အားနှင့် ပြန်လည်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းတို့ကိုလည်း မြင့်မားလာစေနိုင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် တရားထိုင်ခြင်းသည် ကိုယ်ခံအားစနစ်၊ အသက်ရှုမှုနှင့် နှလုံးခုန် နှုန်းတို့ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် နှလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ ဦးနှောက်ဆိုင်ရာ ပြ ဿနာများနှင့် သွေးဖိအားတို့ကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်သည်။ အဆိုပါကောင်းကျိုးများအပြင် ရောင် ရမ်းမှုများ၊ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊ ရာသီသွေးမပေါ်မီနှင့် သွေးဆုံးကိုင်လက္ခဏာများကိုလည်း သက် သာစေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
တရားထိုင်ခြင်းနည်းလမ်း များစွာရှိသည်။ ယင်းတို့အနက်တွင် ၀ိပဿနာကဲ့သို့သော တရား ထိုင်ခြင်းသည် အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ တိုင်းပြည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ မြို့တိုင်းတွင် အနည်းဆုံး ၀ိပဿနာတရားစခန်း တစ်ခုစီ ရှိကြသည်။ အချို့မှာ သေးငယ် ပြီး အလတ်စားများလည်း ရှိသလို တရားစခန်းကြီးများလည်း ရှိသည်။ ကာလပိုင်းဆိုင်ရာတွင်လည်း ကာလတိုအဖြစ် ၃ရက်မှ ၇ရက်အထိ၊ ကာလလတ်အဖြစ် ၁၀ ရက်မှ ၁လ အထိနှင့် ကာလရှည်အဖြစ် တစ်လအထက် စသည်ဖြင့် ရှိကြသည်။
တရားစခန်းဝင်သည့်အချိန်အတွင်း၌ တရားစခန်းတိုင်းတွင် တရားထိုင်ချိန်၊ စားသောက်ချိန် အချိန်ဇယားများအပြင် အရံသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးလုပ်သားများနှင့် ဆေးဝါးများပါ စီစဉ် ပေးထားကြသည်။ အဆိုပါ တရားစခန်းများကို ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသော ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး များက ဦးဆောင်တည်ထောင်ထားကြပြီး အတွေ့အကြုံရင့် တရားပြဆရာများနှင့် လုပ်အားပေးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြသည်။
တရားစခန်းဝင်ချိန်အတွင်း၌ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လို အပ်သော ကုသမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် အနည်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့၏ ရှစ်ပါးသီလကို ဥပုသ်စောင့်ထိန်းသူများကဲ့သို့ စောင့်ထိန်းလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒရှိပါက ကိုးပါးသီလ၊ ဆယ်ပါးသီလတို့ကို လည်း ခံယူနိုင်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အား မွန်းလွဲချိန်နောက် ပိုင်းတွင် အစားအစာစားခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပေ။ ညနေပိုင်းသို့မဟုတ် ညပိုင်းတွင် တရားစခန်းဝင်သူ များအားလုံးအတွက် သစ်သီးဖျော်ရည် သို့မဟုတ် အခြားပုံစံတူများကို စီစဉ်ပေးလေ့ရှိသည်။ သို့ဖြစ် ၍ သင့်တွင် ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ် အစာအိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများရှိပါကလည်း စိတ်ချလက်ချ နေ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရားစခန်းအများစုသည် အချိန်ဇယားအားဖြင့် တူညီလေ့ရှိကြ သည်။ လူတိုင်းသည် မနက် ၃ နာရီတွင် အိပ်ယာမှ ထရမည်ဖြစ်သည်။ မနက်စာစားချိန်မှာ နံနက် ၆ နာရီဖြစ်ပြီး နေ့လည်စာစားချိန်မှာ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင်ဖြစ်သည်။ အိပ်ချိန်မှာ ည ၉ နာရီသတ်မှတ် လေ့ရှိသည်။
တရားထိုင်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်း ကျိုးများကို ရရှိနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အတွေ့အကြုံရင့် တရားပြဆရာများရှိသော တရားစခန်းများတွင် တ ရားထိုင်ခြင်းက အဆိုပါအချက်များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် ရန်ကုန်ရှိ တရားစခန်းအချို့နှင့် မိတ်ဆက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ တရားစခန်း
ယင်းသည် အမှတ် ၅၅-က၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်တွင် တည်ရှိသည်။ နည်းလမ်းမှာ မဟာစည်ဆရာတော်၏ ၀ိပဿနာနည်းဖြစ်သည်။
(၂) ဓမ္မဇောတိဝိပဿနာ တရားစခန်း
ယင်းမှာ ၀င်္ကပါရေလယ်ကျောင်း၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် တည် ရှိသည်။ နည်းလမ်းမှာ ဆရာကြီးဦးဘခင်နည်း ဖြစ်သည်။
(၃) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်
ယင်းသည်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ထင်ရှားသော တရားစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဓမ္မပါလကုန်းမြေ၊ မရမ်း ကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် တည်ရှိသည်။
(၄) ပဏ္ဍိတာရာမ တရားစခန်း
ယင်းတရားစခန်းသည် မဟာစည်ဆရာတော်၏ ၀ိပဿနာနည်းကို အသုံးပြုသော နောက်ထပ်တရားစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရားပြဆရာမှာ ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတဖြစ်ပြီး အမှတ် ၈၀-က၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တွင် တည်ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အထူးရည် ရွယ်ပြုလုပ်ထားသော တောရတရားစခန်းတစ်ခုလည်း ရှိသေးသည်။
(၅) မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ တရားစခန်း (ဗုဒ္ဓသာသန နုဂ္ဂဟအသင်း)
ယင်းတရားစခန်းမှာ အမှတ် ၁၆၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ရန်ကုန်တွင် တည်ရှိပြီး အသုံးပြု သည့်နည်းလမ်းမှာ သတိပဋ္ဌာန် ၀ိပဿနာနည်းဖြစ်သည်။